ओली र प्रचण्ड मिलेर चुनावमा जानुहुन्छ, नमिली सुखै छैन : रघुवीर महासेठ « News24 : Premium News Channel
ओली र प्रचण्ड मिलेर चुनावमा जानुहुन्छ, नमिली सुखै छैन : रघुवीर महासेठ
काठमाडौं, २० माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठले वैशाख १७ र वैशाख २७ गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दाबी गरेका छन् । र, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै मिलेर चुनावमा जाने पनि उनले दाबी गरेका छन् ।
आज (मंगलबार) काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महासेठले अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्ड मिलेर नै चुनावमा जाने दाबी गरे । उनले भने, ‘उहाँ मिलेर नै चुनावमा जानुहुन्छ, उहाँहरु नमिली सुखै छैन् । पार्टी फुट्दैन् । वामदेव गौतमको एकता प्रस्तावपनि सकारात्मक छ, तर यो प्रस्तावले पार्टी एकता हुने सम्भावना छैन् । उहाँले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुहुन्छ ।’
त्यस्तै उनले आफूहरुलाई अदालत र निर्वाचन आयोग दुवैको निर्णय मान्य हुने भन्दै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘चुनाव त एक सय प्रतिशत हुन्छ । म मित्रहरुलाई भन्न चाहन्छु कि चुनावका लागि हामी त तयारीमा जुटिसक्यौं । तपाईहरु पनि जुट्न्होस ।
हामी अदालतको निर्णय मान्छौं । संसद पूनःस्थापना भनेको पनि उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीनै प्रधानमन्त्री बन्ने हो । यदि निर्वाचनको हकमा पनि निर्णय लियो भने हामी आत्मसात गर्छौं । संवैधानिक इजलाशको निर्णय पर्खेर बसेका छौं । छिटोभन्दा छिटो इजलाशबाट निर्णय आउँछ ।’
उनले नेकपा एकता हुँदा बखत नै सही तवरले नभएको गुनासो पोखे । उनले विगत सम्झिँदै भने, ‘हाम्रो पार्टीको एकता जुन प्रकारले सुरु भयो, त्यो राम्रो तवरले भएको भए दुर्घटना हुने थिएन् । एकता प्रक्रियाको धेरै कुरा मलाई थाहा छ ।
नेकपाका दोस्रो अधयक्ष प्रचण्डले जुन राजनीतिक अभियोगपत्र भन्नुभयो, त्यसमा पनि यो एकता प्रक्रिया फलानोको भरमा, फलानोलाई साक्षी राखेर भन्नुभएको छ । एकता प्रक्रियामा सूर्य छापमा चुनाव लड्ने भन्ने सहमति थियो, तर त्यो सहमति २४ घण्टा नबित्दै सूर्य छापमा चुनाव लडे राम्रो हुँदैन भनेर हाम्रै पार्टीका नेताहरुले भनेर प्रचण्डजी ब्याक हुनुभयो ।
तर, हामी मोर्चाबन्दी गरेर चुनाव लड्यौं । चुनाव सकिएपनि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा करिब दुई तिहाईको सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री ओली बन्नुभयो । यो बीचमा सरकारले धेरै राम्रा काम गर्दागर्दैपनि पार्टीभित्रबाट सहयोग प्राप्त भएन् ।
प्रतिपक्षमा कांग्रेस थियो, तर उहाँहरुले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुभएन् । हाम्रै पार्टीभिबाट प्रतिपक्षको भाषा बोल्न थाल्नुभयो । ऐतिहासिक काम गर्दागर्दै पनि आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भयो ।’
आफ्नो पार्टीको सरकारले धेरै राम्रो काम गर्दापनि त्यसको सही व्याख्या र जनतामा प्रचारप्रसार गर्नुभन्दा पनि यो सरकारले केही गर्न सकेन् भनेर आफ्नै पार्टीका साथीहरु लागेको पनि उनले आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘उल्टै सरकारले काम गर्न सकेन भनेर ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माग गरियो । विशेष संसद अधिवेशनको लागि माग गर्नुभयो । संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने माग गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष हाम्रै साथीहरु जानुभयो ।
यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री झस्किनुभयो । सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दी र घेराबन्दी निरन्तर भयो । एकपछि अर्को श्रृंखलाले यो संसद भंग भयो । यो कुनै खराब उद्देश्यले भएको होइन । कांग्रेस र राजपाले आफ्ना योजना हाम्रो पार्टीभित्रैबाट कार्यान्यवन गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कदम चाल्नुभएको हो ।
उहाँले कि प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्दथ्यो या निर्वाचनमा जानुपर्दथ्यो । देश जुन बाटोमा गैरहेको थियो, त्यसमा निरन्तर जानको लागि एउटै बाटो थियो–त्यो संसद विघटन हो । उहाँले देशलाई नयाँ जनादेशमा लैजानको लागि उहाँले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुभएको छ ।
वैशाख १७ र वैशाख २७ गते । अहिले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन् ? भनेर विवाद छ, तर चुनाव सय प्रतिशत हुन्छ । सरकारसँग विकल्प छैन् । संसद भंग भएपछि ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनैपर्छ । ६ महिनाभित्र भएन भने सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । पुष ५ गते संसद विघटन भएको छ । असार ५ गतेभित्र चुनाव गराउनैपर्छ ।’
महासेठले निर्वाचन आयोगले जे निर्णय दिन्छ त्यो पनि आफूहरुले मान्ने दाबी गरे । उनले भने,‘हामी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय मान्छौं । हामी आन्दोलनमा जाँदैनौं । अदालत र निर्वाचन आयोगमाथि हामीलाई विश्वास छ ।
आयोगलाई प्रभावित पार्नलाई हामी मांशहारी आन्दोलनको धम्की पनि दिँदैनौं । मांशहारी आन्दोलनको नाममा सम्मानित अदालत डराउँदैन् । यो बेलामा आफूअनुकुल निर्णय नआए आन्दोलन गर्छु भन्नु बेकार हो ।
जनयुद्धबाट के/कति क्षति भएको छ ? भन्ने कुरा यहाँहरुलाई थाहा नै छ । १७ हजार नेपालीले ज्यान गुम्यो । नेपाली जनता त्यो बाटमो जाँदैनन्। आयोगको निर्णय मान्छौं ।’